akpụ akpụ ute
Eva play ute
Best yoga ute niile yoga hụrụ
All na mma freaks onye-adabere na omenala ụzọ nke na-anọ kwesịrị ekwesị mara mkpa nke yoga nke ọma. Yoga bụ ihe niile banyere gị postcho, kama yoga asanas-ọzọ kpọmkwem. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta kacha erite uru site yoga, ị ga-hụ na gị ịnọ otú ziri ezi. Iji nweta nri postcho na iji hụ na gị azụ bụ ogologo mgbe ị na-eme yoga asanas dina ala gị azụ, a yoga ute bụ nnọọ aka.Ọ bụrụ na ị na-mgbagwoju anya banyere ma na ị chọrọ a yoga ute ma ọ bụ nke ute ị ga-azụ, anyị nwere ihe ngwọta maka gị. Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị mere i kwesịrị nwere otu, ụdị yoga ute na ndị kasị mma ị ga-eburu: -
Mere yoga ute dị mma maka ị?
A yoga ute na-enye gị onwe gị yoga ohere. Ọ bụrụ na ị na-eme yoga na a ọha ogige, akọwapụta gị ohere na-enyemaka nke a ute-egbochi ọha intrusion n'ógbè ahụ na i nwere ike ime yoga enweghị ihe ọ bụla disturbances.
Ọ na-mejupụtara ihe mgbochi-skid ihe onwunwe. N'ihi ya, ọ ga-egbochi gị ukwu n'ihi Ọsụsọ na-eduga na obere unan ka ị na-yoga asanas
A yoga ute ga-enwe mgbe nile ka enyi gị na a ezo ụtụtụ. Ọ bụrụ na ọ Mmiri zoro niile abalị na gị ahịhịa ahihia bụ mmiri, na-arụ yoga na pụrụ iche yoga ute ga-ekwe ka ị nọgide na-yoga enweghị edekwa.
Ụdị yoga ute
Nnyapade yoga ute
Ndị a bụ ndị na-emegide skid yoga ute na dị mma maka beginners na-adịghị enwe nnọọ na-achịkwa ahụ ha mgbe n'ịrụ yoga asanas. Ha bụ ezigbo ndị ọsụsọ a ọtụtụ nke mere na ha adịghị ileghara.
Travel yoga ute
Ndị a bụ ìhè na ibu na mfe na mpịachi mere na i nwere ike na-ebu ha na ebe ọ bụla ị na-eme njem. Otú ọ dị, ha na-abụghị ezi na-eji kwa ụbọchị.
Natural roba yoga ute
N'ihi na ndị chọrọ iji belata ha onyinye kwupụta gburugburu ebe obibi mmetọ, ndị a yoga ute zuru okè. Ebe ọ bụ na ha na-mere nke eke Efrata, ndị a ute dị mma maka na ndị mmadụ nwere mmetụta ọsọ ọsọ anụ.
Jute yoga ute
The omenala yoga ute mee ka a mere nke jute n'ihi eke isi akụrụngwa. Ha na-adịghị otú inogide ma ga-ezi nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ a na-eri-irè nhọrọ
Cotton yoga ute
Ndị a na-mere nke oké owu ákwà na mma maka ndị na-amasị na-asa ha nwere ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ. Ọ bụkwa a na-eri-irè nhọrọ na-atụle.
Post oge: Oct-24-2018
Luoxi ulo oru ogige, Luozhuang, Linyi, Shandong, china